Temperature Temperature Gun, KN95, Meridian Analyzer - Teknolojia ara-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
Fahasalamana ambaratonga voalohany sy fahasalamana mpamatsy mpitarika
Teknolojia fitsaboana miorina amin'ny Hebei Evidence, LTD., Natsangana tamin'ny taona 2004, dia orinasa teknolojia avo lenta, orinasa teknolojia avo lenta sy salantsalany. Mpanome serivisy voalohany sy serivisy ara-pahasalamana ho an'ny fianakaviana izy io. any Chine, mpanamboatra fitaovana fiarovana ara-pitsaboana.
Ny orinasa dia manana rafitra fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary varotra mahaleo tena tsara.
Sarontava fandidiana 1. kilasy fandidiana medika st ...
Saron-tava an-tsofina 1. Mahazo aina ...
Saron-tava 1. Mahafinaritra ny mitafy ...
KN95 1. Fomba endrika tsara tarehy kokoa sy mu ...
Temperature Temperature basy X5 ity vokatra ity ...
X6 Thermometer volomparasy ho an'ny olon-dehibe, nomerika ...
X6 Gray Surezen infrared thermometer dia po ...
X6 mahitsy 1. Mode telo, backlight disp ...
Ny famokarana orinasa mihoatra ny 3 tapitrisa thermometers amin'ny handrina, mihoatra ny 100 tapitrisa sarontava fitsaboana ho an'ny orinasa, sekoly ary vondrona hafa, manome fiarovana ilaina hanohizana ny asa sy ny fampianarana.
Fikarohana tsy miankina
Ny fampandrosoana ny orinasa sy ny famokarana masinina fahasalamana maramara, mpanadihady meridian nentim-paharazana sinoa.
Hebei porofom-pitsaboana Hebei dia nandray anjara mavitrika tamin'ny laharam-pahamehana amin'ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina.
Sehatra Serivisy Smart Medical
Miantehitra amin'ireo andrimpanjakana misy ifotony sy angon-drakitra lehibe momba ny fitsaboana amin'ny Internet, Miezaha manangana "hopitaly, dokotera, fianakaviana, olona tsirairay", "People, life" ho iray amin'ireo sehatra serivisy ho an'ny serivisy ekolojika fitsaboana.
Ny birao Beijing dia mizaha ny fiasan'ny mailaka iraisam-pirenena ary ...
Vao tsy ela akory izay, ny Tale lefitra misahana ny fitantanan-draharahan'ny paositra any Beijing dia nitarika ekipan'ny Air Mail Processing Center hanadihady ...
Tamin'ny faha-21, nisy mihoatra ny 180.000 fanampiny fanampiny manerantany, ny andro be indrindra hatramin'ny nitrangan'ny fipoahan'ny. Amin'ny 22 eo an-toerana ...
Araka ny fitenenana, ny sakaiza be vava dia mitondra tany lavitra eo akaiky
Ny teknolojia ara-pitsaboana ao Hebei Evidence dia nanolotra karazana famatsiana maika ilaina amin'ny fisorohana valanaretina any Italia, France, Spain, Kazakhstan ary ireo firenena hafa nandritra ny fiakaran'ny valanaretina.
Ny fiarovana ny fahasalaman'ny olombelona no andraikitsika ambony indrindra.